အပြင်လောကကြီးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့် - Cele Gabar
အပြင်လောကကြီးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
By bagyiaungPosted on July 28, 2020
ဒါရိုက်တာ၊သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချောလေး ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးသဇင်ထူးမြင့်ကိုတော့ ရွှေကြိုအဖြစ်စတင်သိခဲ့ကြတာပါ ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်ပိုင် Vlog လေးတွေနဲ့အတူ Music Video တွေ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရပြီး ပရိသတ်အားပေးဝန်းရံမှုတွေလည်း တခဲနက်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။
သဲလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ရတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ မိသားစုထဲမှာလည်း အငယ်ဆုံးသမီးလေးဖြစ်လို့ တစ်မိသားစုလုံးက ဖူးဖူးမှုတ်အချစ်ခံရတဲ့ သူလေးဖြစ်ပြီး အနေအေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။ လတ်တလောမှာတော့ သဲက အပြင်လောကကြီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထွက်ကြည့်ချင်တယ် တစ်နေ့ တစ်နေ့ အိမ်ထဲမှာပဲ ဆိုတဲ့စာသားလေးကို သူမရဲ့ မိုင်ဒေးကနေတဆင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး အပြင်လောကနဲ့ အထိတွေ့ နည်းခဲ့တဲ့ သဲ တစ်ယောက်ကတော့ သာမန်သူတွေလို အပြင်လောကကြီးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြည့်ချင်ဟန်တူပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ စန္ဒလေးလည်း အမြန်ဆုံးအထမြောက်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source : Thazin Htoo Myint
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Thazin Htoo Myint, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post ဖိုက်စတားအဖွဲ့နဲ့အတူ အတွဲညီညီရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာအသစ်
Next post ပထမဆုံးဦးအနေနဲ့ ????? ???????? ???? လေးတစ်ခု ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အိချောပို